Andry Rajoelina : Vola avy aiza? -
AccueilRaharaham-pirenenaAndry Rajoelina : Vola avy aiza?
16/08/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Tsy neken’ny MAPAR sy ny TIM hatramin’ny farany ilay lalàna mifehy ny fifidianana nolanian’ny solombavambahoaka maro an’isa izay notsipahan’ny HCC rehefa tonga teo am-baravarana ny fampihorohoroana sy ny fandrahonan’ny mpanohitra…
Efa manao propagandy mialohan’ny fotoana sahady tokoa mantsy i Andry Rajoelina, mitety faritra sy faritany, mandeha “jet privé”, mizara vola etsy sy eroa, manakarama artista maro, sns. Mazava ho azy fa vola be toko no efa lanin’ity “jeune putschiste” ity, raha tsy hiresaka afatsy ny fandaniana nanomboka tamin’ny faha-21 Aprily no mankaty fotsiny ihany. Efa ireny naseho tamin’ny vahoka ireny moa ireo vazaha mpiray petsapetsa aminy mikasika ilay IEM. Mazava ho azy fa tsy maintsy isan’ny mpamatsy vola an-dRajoelina ireny vahiny ireny.
Karazan’ny nandrora mintsilany anefa ireo fiarahamonim-pirenena amin’izao fotoana. Izy ireo ihany mantsy no anisan’ny nanohana sy nanampy ny mpanohitra tamin’ny fanoherana ilay lalam-pifidianana. Ankehitriny, ireo fiarahamonim-pirenena indray no mametraka baraingo sy adihevitra mikasika ny famatsiam-bolan’ny antoko politika, indrindra ny famatsiam-bola avy any ivelany izay isan’ireo notsipahan’ilay lalàm-pifidianana niteraka resabe ireny. Vokany, mahazo mampiasa vola sy famatsiam-bola avy any ivelany ireo mpanao politika, famatsiam-bola azo antoka fa tsy maintsy misy tambiny ary tsy ho kely velively mihitsy.
Miverina amin’ny vola be kirakiraina sy ampiasain-dRajoelina amin’ny propagandy mialohan’ny fotoana ity ny resaka. Avy aiza avokoa ireny vola be ireny? Mba afaka mitondra fanazavana ny amin’ny fiavian’ireny miliara be ireny ve ity “putschiste” ity? Tahaka ny ahoana ny fananana teo am-pelatanan’izany Andry Rajoelina izany nialohan’ny naha filohan’ny HAT azy dia tahaka ny ahoana izany amin’izao fotoana izao?
Tokony hotakian’ny fiarahamonim-pirenena amin’reo kandidà rehetra tokoa aloha ny famatsiam-bolan’izy ireo amin’ity fifidianana ity ndrao hataon’ny sasany fanadiovana vola maloto fotsiny ihany no tena antony hirotsahany ho kandidà!